Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa ka dhacay maxkamadii 2da Wariye la keenay shalay
Maxaa ka dhacay maxkamadii 2da Wariye la keenay shalay
Labadii wariye ee dalkaSweden uga yimid inay soo baadhaan doorka ay shirkadaha shidaalka gaar ahaan Lundin ka qaadatay xasuuqa ay ciidamada Itobiya ka wadaan Ogadeya ayaa shalay la soo taagay maxkamad ku taala Adisababa.
Labada wariye ayaa markii la keenay maxkamadda u sheegay inay si xirfad ah u gudanayeen hawshooda saxafinimo markii la qabtay iyagoo la socda cutub ka mid ah CWXO.
Labada saxafi ayaa ka sheegay maxkamadda shalay inay u socdeen say u soo baadhaan shirkadda Swedish-ka ah ee shidaalka ka baadha Ogadenya. Shirkadda Lundin ayaa lagu eedeeyay inay kiraysatay ciidan Itobiyaan ah oo waardiyeeya kuwaasoo xadgudub farabadan u gaystay dadkii shacabka ahaa. Wasiirka Arimaha Dibadda Sweden Mr. Carle Bildt ayaa ka mid ahaa golaha saree shirkaddan.
In ka badan laba saacadood oo su’aal iyo jawaab la’isku celcelinayay ayuu saxafiga Schibbye ku sheegay inay shaqadiisa tahay sababta uu ula kulmay jabhadda ONLF, wuxuuna iska fogeeyay in isaga iyo saaxiibkii ay JWXO tababar hubka ah siiyeen. Video-ga isagoo qori gacanta ku haya uu xeer-ilaaliyaha keenay maxkamadda ayuu ku sheegay inay ahayd Hotel Somaliya ku yaala mar uu wareysi ka qaaday dagaalyahan ka tirsan ururka Al-Shabab.
Waxaa maxkmadda joogay sharciyaqaan caan ka ah dalka Sweden oo la yidhaahdo Tomas Olsson iyo qaar kaloo ka socda Sweden. Wuxuu sheegay mudane Olsson inay labada saxafi ay si fiican uga jawaabeen su’aalaha uu weydiiyay xeer-ilaaliyaha, isagoo yidhi; ” si fiican ayay u cadeeyeen sababta ay u yimaadeen Ogadenya, taasoo ahayd inay baadhaan dhibaatada ay shirkadaha shidaalka u gaysteen dadka iyo xoolaha, umana aanay soconin inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda waddankaa, isla markaana labada dhan ee ishaya, Itobiya iyo ONLF midkoodna ma taageersana, taasaana ahayd nuxurka dooda.”
Waxaa meesha ka cadaatay inay labada saxafi ahaayeen rag ku takhasusay waxa loo yaqaano –saxaafadda badhitaanka (Investigative Jouralism), oo meela badan ka soo sameeyay baadhitaano sida dhibaatada taraafikada Filibiin, sidoo kale xaaladaha qaxootiga ee Kenya iyo Somaliya. Waxay kaloo baadhitaan ku sameeyeen Naasiga cusub ee dalka Mareykanka.
Wuxuu u sheegay Scibbye maxkamadda inuu 199 maalmood oo baadhitaan dagaal ah ka soo sameeyay 16 dal.
Arinta maxkamadda 2dan saxafi ayaa dalka Sweden aad loola socdaa iyadoo lala xidhiidhinayo inuu ku lug leeyahay WAD Carl Bildt. Sidoo kale saxafiyiinta caalamka ayaa aad ula socda.
Safiirka Sweden u fadhiya Itobiya, Jens Odlander, wuxuu sheegay in saxafiyiin badan oo dagaalada wax ka qora ay la soo hadleen say markhaati uga furaan maxkamadda horteeda, laba ka mid ahna wayba yimaadeen ayuu yidhi.
Waxaa kaloo uu yidhi safiirka; ” arima la yaab leh ayaa ka socda. Waxaan warqad u dirnay dhowr qof oon naqaano oy ka mid yihiin saxafiyiin kuwaasoo noo soo gudbiyay magacyada 800 oo saxafiyiin ah, kuwaasoo u badnaa dalalka loo yaqaano (Anglo-Saxon), waxaa kaloon haynaa ugu yaraan 20 qof oo sheegay inay diyaar u yihiin inay markhaati ka furaan maxkamadda horteeda, qaar kaloo badanna waxay sheegeen inay qadiyaddan wax ka qori doonaan.”
Labadan saxafi ee u dhashay dalka Sweden waxay ka mid yihiin 10 saxafi oo lagu soo oogay argagaixiso ayay taageereen. 8da kale waa Itobiyaan, shan ka mid ah ay dalka ka carareen oo maqnaan lagu maxkamadenayo.
Maanta oo Arbaca ah waxaa ka mid ah dadka markhaatiga ah ee maxkamadda iman doona laba saxafi oo kala ah mareykan iyo Ingriis oo maxkamadda u sharxi doona sababaha keena inay mararka qaarkood saxafiyiinta u soo raacaan dagaalyahanka say warbixino dhab ah uga soo qoraan xaaladda.